Somalia oo hal arrin uga sara-martay caalamka oo idil (Aqri waxa ay tahay). – Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Somalia oo hal arrin uga sara-martay caalamka oo idil (Aqri waxa ay tahay).
Waddanka Jabuuti, oo inta badan shacabka ku nool ay yihiin Soomaali asal ahaan, waxaa la guday dumarka 93%. Waddanka Tansaaniya, waxaa la guday dumarka 15%.
Su’aal: Maxaad fikrad ka qabtaa gudniinka dumarka/googooynta? Ma rabi lahayd in gabdhahaaga la gudo? Maxaad ku raacdey ama ku diiddey? Fikradahaaga nagula wadaag qeybta faalada ee hoose.
KaLaFoGe June 5, 2013
KaLaFoGe March 21, 2014
Qodobo Ka Kooban Toban Arimood Oo Kuu Sahlayo Sidii Aad Iskaga Joojin Laheyd Balwada Qaasatan…
KaLaFoGe January 25, 2014 January 24, 2014